Daawo: Xukuumada iyo Xildhibaanada DF-Somalia oo ka hadlay Doorashada Somaliland iyo Fariinta ay u direen | Kalshaale
Daawo: Xukuumada iyo Xildhibaanada DF-Somalia oo ka hadlay Doorashada Somaliland iyo Fariinta ay u direen
Nov 14, 2017 - 41 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Shirkii Golaha Wasiirada ee Soomaaliya ayaa oo uu Shir Gudoominayey R/wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxaa lagu bogaadiyey Qaabka Nabad-gelyada ah ee ay ku dhacday Doorashada Somaliland, Waxayna sheegeen inay tahay Wanaag guud ahaanba Soomaaliya.
Dhinaca kale Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay Musharixiinta u taagan Xilka madawaynaha Somaliland inay u diyaar garoobaan wadahadal lagu Mideeyo Guud ahaanba Soomaaliya, Waxayna bogaadiyeen Qaabka ay doorashadu u dhacday.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo Xildhibaan Sidiiq Warfaa ayaa sheegay in Mudo dheer aan wax kasoo Kordhay Jirin Gooni goosadkii, waxayna usoo jeediyeen Somaliland inay Bilaabaan Wadahadalkii Soomaaliya u dhexeeyay, Waxayna Xuseen in Wakhtigan maanta Dunidu qaaday Wado midnimo ah.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (41)
Waar midnimada KA daaya.
Iidoorku hadey midnimo maqlaan
Dacar//qarasta Ku kaceysa.
Indr waan ku salaamay
Kalshaale anigu ma soo galo
Sababtoo ah qolyo iidoor ah oo
Ma shaqaystayaal ah.waxaan ka ahayn
Suldaan laalays oo isagu nin oday ah
Mooye.ayaan u nacay.
Kkkkkkkk doorasho ku lahaa
War dadkiina dhinac ka raaca.
Runtii maaha baarlamanka iyo DFS wakhti noogu baaqaan wada hadal.
Bal intiina caqliga qabta is weydiiya yaanu la hadalaa?
Ma dawlada Xamar oo aan dhul ay maamushaa jirin?
Ma 6 maamul ee kale ee aan dawladeeda dhexe daryada ku Ee leh wax aan laga soo talo gelin DFS ma ku dhaqaaqi karto, xitaa hadii alshabaab la weersrayo.
Waar walaweyneey wax aan Hambalyo ahayn noogama kiin banaana.
Markaa idinku mid noqotaana wadahadal diyaar baanu u nahay.
Bal gartaa ina Sanweynana u gee.
Kuwan hadlaya ee baarlamaanka ah yay metelaan, yaa doortay?
Waa qaswadayaal ma shaqayste ah oo mooshin ku noola!
Kasoo kale anaga waxba nooma sheego?
Raqba waa ku rageed!💪💪💪
Maamulka magaalada Buuhoodle ee Somaliya ayaa dib u eegitaan ku sameynaya shirkada Telefoonada ee Telesom Iyo Somtel . Ka dib markii ay raaceen amarka maamulka gobolka waqooyi Galbeed ee Somaliya (somaliland )
Maxaa Ka cusub Doorasho ku sheegii qabiilka isaaq ?
Farxiyo, kkkkkkk 2 iidoor ah oo aanu sxb nahay 2 habeen ma seexanin, waxay halis ugu jiraan inay waashaan, mid waxuu kudhihi: markay arkeen inuu ciro badiyey ayey sanduuqyadii jiiro mugdi lagaleen, kan kalena waxuu kuwaashay talephone iyo hadaan lahadlay hargaysa waxaana horeeya muuse ee gadhka kaadi iiga xiir haduu cirro badiyo kkkk ujedkayga waxaa weeye: la isku baaba’ oo kala qabashadoodii baanu ku daalay ee ma caqli gal baa in ilaa iyo hadda latirinaayo! Kkkkkkkk
Xamar xaalkeedu ma dhowa ee Dowlada p/land waa inayna wakhti iskaga dhuminin xamar ee waa inay samaysato xisbiyo oo ay ku dhaqaaqdo one man one vote, yacni markii la xoreeyo xamar waxaa la samayni doonaa xisbiyo utartama dowlada dhexe lkn hada waa lagama maarmaan in lasameeyo xisbiyo u tartama dowlada p/land, ujedkayga waxaa weeye: p/land waxay maskaxdeedii iyo muruqeediiba galisay xamar ee waxii hada ka dambeeya gudaheeda haka shaqayso yacni xisbiyo ka kooban cumar, ciise iyo cismaan kkkkkkkkkkkkkk
Xamar way kudaysay oo waxay noqotay xero ay kuhardamaan ugandis iyo EY oo dhan ee yaan wakhti dambe la iskaga dhuminin, waa iga talo
Cabdiraxmaan, indr sln sare, long time, busy.com ee see you later dhamaantiin
WAAR KUWANI MA WAXAY DUL FADHIYAAN RAQDII MAANDEEQ EE 1991KII LAGU KALA TAGAY KKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKK
WADHI WAAR KUWAN WIISH HA LOO DIRO SOO DHUFTA
Xamar ilaa habargidir kuxasisho oo eey dhamaato xamar unukaa leh iyo guribaa layga heystaa waan walaaqeynaa
WAAR JUGLE SXB
SADDEXDA NIN KII KURSIGA FUULAABA WAA SAME LKN ADIGA MAXAA KAAGA CABA KKKKKKKK
Horta waan yaabaye kuwaan sheegta dfs maxishoodaan miyaa nin markuu qudbeynaayo gadaal fiirinaaya in kaarihii ugaandheysku katagay ayaa dadkale utanaagoonaya YAAAAAAB
Inaadeer salaamulaahi,igama gudoon salaan gobeed.
WAA runtaa barxadii way isku dhex yaacday.
Ilaahow sharkeeda na mooti.
Mooryaanta Xamar joogta maxay Hargeysa u sheegi karaan?
Dowlad waydiinaya dadkooda ninkee rabtaan in idin xukumo? Shacabkana jawaab laga sugayo!
Iska hadlaayow ina igarrre. Waa khiyaano qaran waxan meesha ka ciyaya
Waar meey ka hadlaan runta oo sheegan in Somalia tahay mid qudha, waxaa meesha ka dhacayna tahay qabiil dhaanta keligiis ciyaarayay.
Jubbaland, Hirshabeel, Puntland iwm haddii ay yidhaahdaan waanu goosannahay, deetana doorasho beelaysan sameeyaan, ma loo tahneeynayaa, wadahal ma loogu yeedhayaa. Nijaas.
Caqligii Soomaaliyeed waa masakhmay oo waa ina gumeed miidhan.
Walle Suldaan Ali Zubeer baan liishaankiisu dhumin
Ciddii rabta ha cidii ciiddan Soomaali baa leh. Iidoorna waa degaan uu Soomaali ka xigin.
Dhaxalkii Soomaaliyeed weeye.
Warkaada iyo warkaadu ha cddaado
Jugle aka Axmar lover
Waar mee riwaayaddii aad dhigaysay markii Frmaajo villa Soomaaliya la geeyay
Imminka maxaa iska kaa beddelay.
Nifaaqa ijtimicaagia aad bedkan la joogto miyuu kaa soo xidhmay.
Weji Gabaxnimada kaa muuqata xitaa waa mid kuugu qormaysa kabahaada maalin kasta
Walaahi maanta Cali Injir aka Cali Khaliif colaadaan u hayey oo Harti ku kala dilay, waan u cafiyey waayo! Dee Iidoorku haba iska danyaraan laakiin waa dad nidaam iyo kala dambayn aaminsan!
Majeerteenia oo ka dhulweyn kana qanisan maadama laba badood haystaan Somaliana isku xiraan iyo Killilka Somalida Ethiopia ayaga ayaa ka siyaasad fiican, waayo waxay haysteen ayey aduunka tuseen.
Somalia oo dhan intaas ma tusi karaan aduunka!
I Love Somaliland meeshaas ka wada! Awalba idinka ayaa Waqooyi iyo Koofur isku daray! 1960!
Again Viva Somaliland 🖐🇸🇴🖐
Somaliland waxay haysteen ayey aduunka tuseen= one man/woman one vote! In cadaalad u dhacdo rajo ku qabnaa, ninka shacabka rabaan la doortay!
Somalia oo dhan intaas ma awoodan!!
Viva Somaliland allow mid Somalida u roon keen!😻
Ha u jawaabin salaafiga/Wahabiga Cali Zubeer, waa nin ilaa hadda rajo ka qaba in Mooryaan Xadan Dahir Aweys, Catam iyo Mooryaan badan oo kale in Shura hardline idiots Somalia u taliyaan!! Kkkk
Weli ku riyoodo in Xasan Dahir Aweys Somalia wax ka noqon!
Waa doofaar aan quusan oo qabiil iyo diin xukun lagu raadinayo wata!
Insha Allah Somalia madaxa ayaa laga qabin!
Farmaajo iyo Khayre isku group ayaa nahay laakiin waxaan ku nacay, Mooryaan Wahabiyin ah ayaa wax u yeeriya!
Ali Zubeer, suck it🙁
Lop ádiga 20 Sano maamul ahed maxadsokordhisay xata dorasho qof
Iyo cod wad awodiweysay marka away n abada IYO dowladnimada ku faanto24/7? Xamar Maxaadfkagga duwantahay?
Abada Wa nabada
Jugle waxaad dhahday waa boqor darood kkkkk noqorka darood manocaasbaa?
Suldaan Ali zubeer waxaad dhahday waa dofaar wahaabiya juglana waa boqor doqor cadaaladaadu ma nocaasbaa?
War suldaanku beri hore ayuu ka gudbay sanabka qabiilka ee susacleey iyo baraxleey
Suldaanku kama sokeeyo wixii la dhihi jiray somaliweyn
Odow haduusan aqligu shaqaynin qabiilna aadan kagudbin ood qof.dad.beel.soomaaliyeed reer ahaan kunacdo ayaguna intaa inle eg ayay kunici nacaybkaasina midkiina guul umasoo hoyinayo. Lkn waxaa meesha kulumaya wixii idinka dhaxeeyay. Eed wada lahaydeen oon midkiisna gooni u ilaalinkarin ilaa aad wada ilaashataan maahane
DFS kuwan u hadlayaa waa maxishoodayaal!
Yaan igu raacsanayn?
Somaliland inay doorasho qabato oo dadku ay codkooda siiyaan qofka ay rabaan way fiican tahay.
Maxaa u saamaxay?
Daaroodka ayaa ku yar Somaliland ama aana ku lahayn wax saamayn ah siyaasadeeda.
Ma jirto sabob kale ooo ragaadisay Somaliya.
BAAQ KU SOCDA DUQA CAASIMADDA SOMALIA•
Jaalle Guddoomiye Taabid Cabdi, waxaad Tahay Madaxi; Caasimaddi Somalia, Magaaladi ugu shacbi badnayd Somalia, Magaalada kaliya ee aysan Beeli sheegan karin, Magaalo ka shacbi badan 4Gobol, Magaalo ay Somali ku dhantahay Haba lagu kala badnaade, Dastuurki Xalaasha ahaa ee 1961 waxaa ugu Qornayd inay Maqaam Gooni ah leedahay. Jaalle markaan Dulmaray Ahaanta Caasimadda, Waxaan TEBAA inaysan Shacabka Somali u SINAYN maamuka Magaalada. Sidaa Daraadeed Waxaan qabaa in CASIMADDA la siiyo ummadda Somali ee aysan Beesha ugu badan Kaliya la wareegin Maamulkeeda & aaya ka talinteeda. 👳Waxaan qaba, inta laga gaara CODAYNTA shacaba in Degmooyinka loo qaybiyo 5ta Beelood. Haddaanan qaldanayn Degmooyinku waa 17ba, marka haddii 5loo qaybiyo oo ay Beeluhu helaan MIN 3dax, 2da soo hartay in la siiyo Beelaha REER XAMAR & REER MATTAAN ayyagaa ugu horeey deggenaasho ahaane. 🙊🙉🙈Waan ka quustay inay Akhyaarta Barxaddu KAYB ka noqoto dibudhiska Waddanke, FADLAN ciddi igu raacsan aragtidaan ha u gudbiso Warbaahinta kale. Ràyiga ciddi garowsata leh. ☆Jaalle Taabid waxaan qaba inaysan TOOSINTAASI kaa qadanayn 3beri ka badan saa waxaa kula jooga kuwii kula dhiganay Elementeriga ilaa Jaamacadda oo Beel kasta lehe. WBT
Marka aad soo hesho Somali wax wada le ayaad odhankartaa hadalkaasi,maanta looma baahna taasi.Dawlad ku sheega meesha martida ku ahna soo erya oo ha tagaan Tulooyinkii at ka yimaadeen.Shaqooyinka ayayba badsadeen oo aqal sare iyo mid hooose ayayba u soo shaqao tageen.
Puntland waa representetive democracy, macnaha shacabka kapoqabiil keensaden, kapoqabiilka xil dhiban keensadeen, xildhibaanka Madaxweyne keeneen.
Waxaa aduunka looga yaqaan parlementerian democracy.
Waxaa jira general elections. qof kasta cod dhiibto!
Taas ayaa ka saxsan democracy ahaan.
Gaas meesha doorasho ayuu ku jooga.
Scandinavia aan joogo, shacab xisbi ayey doortaan, xisbiga tiro badbaado ayaa ninkii wadanka hogaamin lahaa keena!
Ninka wadanka xukuma shacab ma keenin, parlemanka aya keenay.
USA shacabka ayaa keena nin wadanka xukumaya.
Gaas maaha dictator qasab ku jooga, saacado la doono ayaa parkenamka uuqa loo dirin😎
Laakiin waa in Somalia u gudubtaa hal qof hal cod, taas ayaa ah democracy sax ah, shaqsi kasta xaq u leeyahay cidda wadanka u talnaysa.
Insha Allah way iman.
Jugle iyo Zubeer sida aaminsanahay waa laba nin oo Kumade ah..kkkkkkkk
Waa ii siman yihiin, laakiin ibnu aadamka fikir ayey isku raacaan!
Sheekada Cali Zubeer iyo wadani baan ahay hore u aragnay.
Shabaab waa anti qabiil, they use diinta to inslave us.
Kacaankii qabiilkii waa duugay, they use nationalism to inslave us, and altimately distroy the country.
Zubeer iyo Xasan Dahir waa xisbul islam, waxay rabaan in diinta kugu qabsadaan. Waa nooca dictarorka ugu xun!
Waxay ku oran ninka aniga i diida waa nin diinta diidan, waayo aniga diinta ayaa wax ku xumayaa.
Run qaawan ayaan ka jeclahay in been iyo dhalanteed ku noolaado.
Waa Jugle iyo Zubeer farqiqa u dhaxeeya!
Somali qabiil ka hara diide, dee asaga wax ku qaybsada.
Somaliland waa qabiil nationalists.
Darood oo dhan ha ku wasaan, futada ha ku dilaacdee.
Dameer wasihii ku dhalay was, weligaa in Jowhar kor u dhaafin waa ogahay!
Gudabiirsay fir kuu gelin!
Nijaas ur badan!🖕🏼
LOP waa nin fikirkiisa cilmaaniga iyo beenta ku qubaysta.
Laba daraadle af xumada u dheer tahay.
Forumka waxaynu kala nahay waa la og yahay.
Aragtiisa gaaban inay Somalia halkaa dhigto uma jeedo ee caliqa gaalada islaamka neceb waa ninkii weli u heelleeynaya
Car wakaa ha jawaabo suaal aan hore u waydiiyay oo ahayd bal forumka u sheeg waxa la yidhaa Wahaabiya?
Xitaa waa uu awoodi waayay inu ka soo min guuriyo gaaladii soo tababa bartay.
Waa Cabdullaahi Yusufkii amxaarka keenay ee ku baroonaayay Soomaalinnimo.
Wakaa maanta doollada u ruxaya Iidoorka waddanka kala jarahaya
Bal forumka ha u sharxo horumarka
ee ay keentay qimoqraadiyaddii Sooomaaliya marka civilka ahayd marna kacaanka marka warlordism ahayd
Halka uu ka soo jeedo ee Pudhlayn bal ha u sheego waxa human capital ee yaal ee aanan ka ahayn nijaasnimada ina Gaas iyo dekaddaa la dillaalo.
Ninkani waa biproduct of diin iyo wanaag nacaybka yaalla Europe.
Waxaa inoo ballan ah saaxada Soomaaliya
iyo isagoo sharraxa wahaabiyah
Xertii tima wayntii baa yaabtay
war fureesha oo hada soo dhacay oo ku saabsan dorashada somaliland cidii u baahan farta ha taagto waa loo sheegaaa
Ascwrwb . Qoraalkan hoos ku qoran waxuu GOBO ka soo yiri maskaxda @ : Mudane Wiil Somaliyed . War ma fahanteen , mise waxaad ku qanacdeen Laata , Cuza wa Manaat ?
Waa nasiib darro, iyo caqli daanyeernimo tan ugu darran in nimankaan wasiirada dowladda dhexe sheegta eey dhahaan doorashada quruxda badan, ee ka dhacday Hargeeysa, waa guul u soo hoyatay Somaliya. Iyaga oo og, waxa eey nimnakaan Isaaqa doorashada qabiil u qabsadeen eey “end goal” natiijada eey doonayaan eey tahay in eey Somaliya ka’go’aan. Taas oo khiyaano ah. Daannyeeradaan dowladda dhexe isku sheega, waxaa uga rooneeyd, ugu yaraan in eey ka’aamusaan.
Laakiin, waa meel ciyaala suuq, iyo mashaqeeytayaashii aduunka iskugu yimaadeen. Sidee nin shaqeeysan waayay, uu ugu shaqeeyn dad kale iyo dal?
Nintahow runta ayaan kugu jeclahay! Kkkkkkk
Laba waxba weliyey waan ogaa:
1. In Cali Khalif Somaliland daacad u yahay oo Dhulbahante Somaliland ku daray macal Xaglotoosiye meesha geeyey!
2. Alshabaab in yihiin Habargidir bomb ku xira caruur Eelay ah, sida aad sheegtay aan ogolayn Xamar unukaa leh iyo Gurigaan aniga leh.
Laakiin mid ogow macal Habagidir ayaan ku heshiinayn oo kala socota!
You will be looser at the end!
Anaga Majeerteen waxaan ku xisaabtamayna in Bossaso ka qurux badnaato kana weynato kana qanisanaayo Xamar! Marka buuqa Xamar ka jira dan weyn ayaa ugu jirta Puntland iyo runtii Somsliland..
Sxb guul ma joogtaan! Haday xitaa hirgasho waa shaqsiyaad ee maaha beesha Habargidir oo dhan oo dhulkoodii facood ka hareen.
Wahaabi, waxaa laga wadaa Sheik Maxamed Cabdiwahaab oo MI5 ahaa in 1890;s oo markii gaalo crusade ku guul daraysteen ayey goosteen in Islam wax foolxun oo dadka caburiya oo dhib badan laga dhigo si looga yaaco, sabab lagula dagaalo la helo! There you have Wahabism, dariiqo jirta xitaa maaha! Waa project gaalo islam kula dagaasho.
Madarasa schools, naag Muxrim wadan, niqaab, siicide bomber! Xitaa magicii Salaafi waa afduubteen, now its bad Word! Brutal killers and siucide bombers!!!!! Yaab
Hadaad rabto in ogaato sida u fekeraan meel dheer haka raadin, you have Alshabaab! They are Wahabists, successful project for Mi5, later CIA iyo Mossad kusoo biireen.
Jabaabtii waa all muslim countries are burning.
Ma kula tahay in iska timid in wadan kasta oo muslim gubanayo meel kalana dhib ka jirin!
allow dadka aqli sii!